Marx, Lenin na Ho Chi Minh oriri na ọṅụṅụ na Engels na India
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Marx, Lenin na Ho Chi Minh oriri na ọṅụṅụ na Engels na India
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Entertainment • Akụkọ Ejiji • India na -agbasa ozi ọma • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Marx, Lenin na Ho Chi Minh oriri na ọṅụṅụ na Engels na India.
Ndị otu ọchịchị Kọmunist nọ n'isi obodo Kerala nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ India kemgbe afọ iri isii gara aga, ma ndị ntuli aka ka na-ewu ewu.
N'obodo Athirappilly na Sọnde, nwoke na-alụ nwanyị ọhụrụ, Friedrich Engels, kekọtara eriri na nwunye, Bismitha.
Ndị bịaranụ bụkwa nwanne Engels Lenin, yana ndị enyi nwoke ahụ bụ́ Marx na Ho Chi Minh.
Ndị ikom anọ ahụ bụ ndị òtù Kọmunist nke India.
Na steeti Kerala nke dị na ndịda ọdịda anyanwụ India, otu ndị Kọmunist nọ n'ọchịchị kemgbe afọ 60 gara aga, ma ndị ntuli aka ka na-ewu ewu.
Nke a na-ewu ewu n'ezie, na ndị nne na nna na steeti na-akpọkarị ụmụ ha aha ndị a ma ama na òtù ndị Kọmunist.
Onye na-alụ nwanyị ọhụrụ, Friedrich Engels, kekọtara eriri na nwunye, Bismitha. Ndị bịaranụ bụkwa nwanne Engels Lenin, yana ndị enyi nwoke ahụ bụ́ Marx na Ho Chi Minh.
Yabụ, mgbe Marx, Lenin na Ho Chi Minh gbakọtara maka agbamakwụkwọ na Kerala, ka Friedrich Engels na-aga n'okporo ụzọ, ọ nweghị ihe jikọrọ ya na njem oge.
N'obodo Athirappilly, onye na-alụ nwanyị ọhụrụ, Friedrich Engels, onye na-akpọ aha na narị afọ nke 19 German ọkà ihe ọmụma bụ onye nyere aka ịtụrụ ime Marxism, kekọtara eriri na nwunye, Bismitha. Ndị bịaranụ bụkwa nwanne Engels Lenin, onye aha ya bụ onye kpatara mgbanwe mgbanwe Rọshịa nke 1917, yana ndị enyi nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ, Marx na Ho Chi Minh, ndị bu aha nna ntọala Marxism na onye ndu mgbanwe mgbanwe nke Vietnam n'otu n'otu.
Ndị ikom anọ ahụ bụ ndị òtù Kọmunist nke India. Na mberede, Marx na-arụ ọrụ ma na-ebi na ultra-capitalist Dubai, mana ọ feghachiri azụ ịhụ enyi ya ka ya na onye ọlụlụ gbanyere nkwa agbamakwụkwọ, dịka ụlọ ọrụ mgbasa ozi obodo siri kwuo.
Ememe agbamakwụkwọ ọzọ nke mere na June na steeti Tamil Nadu, hụrụ Socialism ka ọ lụrụ n'ihu ụmụnne ya, Kọmunist na Leninism, yana nwa nwanne, Marxism.